37 qof oo qoxooti ah oo lagu dilay rabashado ka dhacay Dalka Congo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA 37 qof oo qoxooti ah oo lagu dilay rabashado ka dhacay Dalka...
37 qof oo qoxooti ah oo lagu dilay rabashado ka dhacay Dalka Congo
Muqdisho(SONNA) Ilaa 37 qof oo qoxooti ah ayaa lagu dilay 117 kalena waa lagu dhaawacay Dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Congo,xilli dadkasi sameynayeen banaan- baxyo ay kaga soo hor jeedeen in dalkaasi Congo laga musaafuriyay ilaa 4 qof oo kamid ah qoxootiga ka yimid dalka Burundi.
War ka so baxay Howlgalka Nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee MONUSCO ayaa lagu sheegay in dadkaasi ay dilkoodi ka dambeeyeen Ciiddamada Amaanka ee dawladu,baaqna ay ka soo saaray rabshadahaasi oo sidoo kale uu ku dhintay askari katirsan ciidamada ammaanka.
Jimmy Nemeyimana waa qaxooti ku nool xero ku taala magaalada Kamanyola oo ah halka colaadu ay ka dhacday. Waxaa u sheegay in sarkaal ka tisan deegaankaasi u booqday maalmo yar uun ka hor halkaas, waxaa uuna sheegay in xukkumadu ay ka war hayso waxaa halkaasi ka socday.
Boqolaal kun oo qaxooti reer Burundi ayaa dalkooda isaga qaxay kadib, markii colaad ay dalkaasi ka dhaqan gashay go’aankii madaxweyne Pierre Nkurunziza ku doonayay in uu xafiiska uu mar saddexaad u tartamo.
Previous articleWasiiradda arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta oo ka shiray dib u dhiska Soomaaliya